Nọmba na ọtụtụ nde
Nọmba na ọtụtụ nde, ọtụtụ ijeri, puku ijeri, crores, lakhs Ntụgharị
Nọmba na ọtụtụ nde, ọtụtụ ijeri, puku ijeri, crores, lakhs Ntụgharị a na-eji iji tọghata nọmba na ọtụtụ nde, ọtụtụ ijeri, puku ijeri, ọtụtụ puku, lakhs na crores. Nakwa na ị ga-enwe ike ịmata otú ọtụtụ ndị efù ọ bụla ọnụ ọgụgụ.
Ọnụ ọgụgụ buru ibu akpịrịkpa:
Short ọnụ ọgụgụ - ọhụrụ ọ bụla okwu uku kari nde bụ otu puku ugboro ibu karịa aga okwu.
Long ọnụ ọgụgụ - ọhụrụ ọ bụla okwu uku kari nde bụ otu nde karịa aga na okwu.
obere ọnụ ọgụgụ ogologo scale
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu aha:
nkejiọtụtụ iri afọọtụtụ narịọtụtụ pukuọtụtụ ndeọtụtụ ijeripuku ijeriquadrillionsquintillionssextillionsseptillionsoctillionsnonillionsdecillionsundecillionsduodecillionstredecillionsquattuordecillionsquinquadecillionssedecillionsseptendecillionsoctodecillionsnovendecillionsvigintillionsunvigintillionsduovigintillionstresvigintillionsquattuorvigintillionsquinquavigintillionssesvigintillionssesvigintillionsoctovigintillionsnovemvigintillionstrigintillionsuntrigintillionsduotrigintillionstrestrigintillionsquattuortrigintillionsquinquatrigintillionssestrigintillionsseptentrigintillionsoctotrigintillionsnoventrigintillionsquadragintillionsquinquagintillionssexagintillionsseptuagintillionsoctogintillionsnonagintillionssentillionsuncentillions
Online random ọnụ ọgụgụ generator
Online random ọnụ ọgụgụ generator site na a random ọnụ ọgụgụ nke ahọrọ nso.
Ntụpọ, ọnụọgụ abụọ, hexadecimal na ndị ọzọ na ọtụtụ usoro akakabarede
Tọghata nọmba nke ọnụọgụ abụọ, ntụpọ, octal, hexadecimal na ndị ọzọ na ọtụtụ usoro.
Roman, arabic, hindi numerals Ntụgharị
Tọghata nọmba na Rom, arabic na hindi nọmba usoro ọ bụla ọzọ.
Arụmọrụ na ọnụ ọgụgụ na fractions, dị ka adianade do, mwepu, multiplication, nkewa, enweghị, cosine, tangen, logarithm, exponential, ike, ọdịmma, radians, degrees.